Electrum Metal Legasy na Gold Green
Electrum dia fitongilanana volamena sy volafotsy vita amin'ny natiora miaraka amin'ny metaly hafa. Ny volamena vita amin'ny volamena sy volafotsy dia mitovy amin'ny electrum saingy matetika no antsoina hoe volamena maitso .
Elector Chemical Composition
Ny electrum dia misy volamena sy volafotsy, matetika miaraka amin'ny varahina varahina, platin, na metaly hafa. Ny kôppera, vy, bismota, ary paladia dia matetika mitranga ao amin'ny electrum voajanahary.
Ny anarana dia azo ampiharina amin'ny legioma volamena-volafotsy izay 20-80% ny volamena ary 20-80% ny volafotsy, fa raha tsy ny firavaka voajanahary, ny metaly synthesized dia tsara kokoa lazaina hoe 'volamena maitso', 'volamena', na 'volafotsy' (miankina amin'ny hoe misy metaly eo amin'ny habeny ambony). Ny tahan'ny volamena ka hatramin'ny volafotsy ao anatin'ny elektrisite voajanahary dia miova arakaraka ny loharano. Ny herinaratra voajanahary hita any Andrea Andrefana dia ahitana 70% hatramin'ny 90% volamena. Ny ankamaroan'ny ohatra ny electrum fahiny dia vola madinika, izay misy volamena faran'izay kely kokoa, noho izany dia inoana fa ny fitehirizan-tsolika dia mbola mitazam-potsiny amin'ny fitazonana tombony.
Ny teny hoe electrum dia nampiharina ihany koa tamin'ny alàlan'ny anarana alemà volafotsy, na dia izany aza dia legioma izay loko volomparasy, fa tsy ny singa fototra. Ny volafotsy alemana dia misy 60% varahina, 20% nikela ary 20% zinc.
Ny elanelana voajanahary dia miovaova amin'ny loko volamena manjelanjelatra miolakolaka, arakaraka ny habetsaky ny singa volamena atolotra amin'ny legaly.
Ny electrométrie Brassy dia misy karazana varahina betsaka kokoa. Na dia nantsoina hoe volamena fotsy ny Grika fahiny, dia ny dikan'ny teny hoe " volamena fotsy " dia midika hoe fitambarana hafa misy volamena, fa midika hoe volafotsy na fotsy. Ny volamena maitso maitso, misy volamena sy volafotsy, dia hita fa mavo-jiro.
Ny fampidiran-tsonia fanampiny amin'ny cadmium dia mety hampitombo ny loko maitso, na dia misy poizina aza ny cadmium, noho izany dia mametra ny fampiasana ny legioma. Ny fampidirana Cadmium 2% dia mamokatra loko maitso maitso, raha 4% ny cadmium kosa manome loko maitso lalina. Ny fanafenana varahina dia mampitombo ny volon'ny metaly.
Ny toetra tena izy mifehy ny electrum dia miankina amin'ny metaly amin'ny legaly sy ny isan-jatony. Amin'ny ankapobeny, ny electrum dia manana fiheverana goavambe, mpitaona hafanana sy herinaratra tena izy, dia rongony sy malefaka, ary manimba ny vatana.
Ny Electrum dia nampiasaina ho vola, hanaovana firavaka sy firavaka, ho fisotroana hosotroina, ary ho toy ny fanangonana ivelany amin'ny pyramida sy vatosoa. Ny vola madinika tranainy indrindra tany amin'ny Tandrefana dia nofantsihana ny electrum ary mbola nalaza tamin'ny fividianana izany hatramin'ny taona 350 talohan'i JK. Ny elanelana dia sarotra kokoa sy mateza kokoa noho ny volamena madio, ary ny teknikan'ny fanadiovana volamena dia tsy fantatra loatra tamin'ny andro fahiny. Noho izany, electrum dia metaly sarobidy malaza sy sarobidy.
Toy ny metaly voajanahary, electrum dia nomena ary nampiasain'ny lehilahy voalohany. Ny Electrum dia nampiasaina mba hanamboarana vola madinidinika faran'izay haingana indrindra, nanomboka tamin'ny faramparan'ny taona 3 millennium BC tany Egypta.
Ny Egyptiana koa dia nampiasa ilay metaly hametaka trano lehibe. Ny fantsom-pisotroana fahiny dia natao tamin'ny electrum. Ny medaly afovoan-jaza ankehitriny dia misy volamena volom-bolamena (metaly noforonina) napetaka volamena.
Aiza no Hahitako ny Electrum?
Raha tsy mitsidika tranom-bakoka ianao na mandresy ny loka Nobel , dia ny fahafahanao mahita ny electrum dia ny mitady ny legioma voajanahary. Tamin'ny andro fahiny, ny loharanon'ny electrum dia loharano lydia, manodidina ny reniranon'i Pactolus, ivon'ny Hermus, izay antsoina ankehitriny hoe Gediz Nehriin ao Torkia. Ao anatin'izao tontolo maoderina izao, ny loharano voalohany amin'ny electrum dia Anatolia. Ny kely ihany koa dia mety hita any Nevada, any Etazonia.
Inona ny gazy mavesatra indrindra amin'ny atmosfera eto an-tany?
Modelin'i Bohr amin'ny Atom
Ireo singa Functional Common - Organic Chemistry
Inona no fifandraisana mamy indrindra?
Fandokoana ny kodiarana sy ny doka ary ny ohatra
A - Vondrona organika
Faha-Samarium - Sm na Element 62
Ny antony mahatonga ny karbôna dioksid dia tsy mifangaro
Inona no atao hoe hydronium?
Hihaona amin'ireo Dallas Cowboys Cheerleaders
John F. Kennedy: Famerenana ny famakiana ny ESL
Miverena amin'ny fomba: Mahaiza Mandanjalanja
Ny 'voaloboka feno herisetra' - Ny maha-zava-dehibe ny lohateny
Fahatakarana ny maso amin'ny fitandremana
Inona no atao hoe sofina swimmer?
Nahoana no maneritery ny atmosfera eto an-tany?
Fihetsiketseham-piainan'i Hitler amin'ny fahefana
Leo Moon (Transit) - Ny Mood sy ny Happenings
St. John's University GPA, SAT sy ACT Data
Ny lehibe indrindra amin'ny fandraharahana lehibe indrindra amin'ny fanombohana salary
Top 100+ sary hosodoko ho an'ny mpanakanto
Momba ny Môdely bodista
Ny fahefam-panahin'ny Kongresy
Faha-50 tapitrisa ny evolisiona
Manamboatra fitaovana sy tombo-kase ao amin'ny fitaovana fiakaran'ny môtô
Glossary: ​​Inshallah, na Insha'Allah